Yesu Asetena Kwan da ‘Nyansa a Efi Nyankopɔn Hɔ’ Adi | Bɛn Yehowa
Yesu Da ‘Nyansa a Efi Nyankopɔn Hɔ’ Adi
1-3. Ɔkwan bɛn so na Yesu afipamfo a na ɔne wɔn te bere bi no yɛɛ wɔn ade wɔ ne nkyerɛkyerɛ ho, na dɛn na wɔanhu wɔ ne ho?
NÁ ATIEFO no ho adwiriw wɔn. Ná aberante Yesu gyina wɔn anim wɔ hyiadan mu rekyerɛkyerɛ. Na wonim no​—onyinii wɔn kurow no mu, na na wayɛ adwuma wɔ wɔn mu sɛ duadwumfo mfirihyia pii. Ebetumi aba sɛ na wɔn mu bi tete afie a na Yesu aboa ma wɔasisi mu, anaasɛ ebia na wɔde fɛtɛw ade ne kɔndua a ɔno ankasa yɛe ayɛ wɔn asase so adwuma. * Nanso, na wɔbɛyɛ wɔn ade dɛn wɔ kan duadwumfo yi nkyerɛkyerɛ ho?
2 Wɔn a na wɔretie Yesu mu dodow no ara ho dwiriw wɔn, na wobisae sɛ: ‘Ɛhe na oyi de nyansa yi fi?’ Wɔkae nso sɛ: ‘Ɛyɛ duadwumfo no, Maria ba no.’ (Mateo 13:​54-58; Marko 6:​1-3) Awerɛhosɛm ne sɛ, nkurɔfo a na wɔne Yesu atra pɛn no nyaa adwene sɛ, ‘Duadwumfo yi te sɛ yɛn ara.’ Nyansa a na ɛwɔ ne nsɛm mu nyinaa akyi no, wɔpoo no. Ná wonnim sɛ nyansasɛm a ɔka kyerɛɛ wɔn no nyɛ n’ankasa nsɛm.
3 Ɛhe na Yesu nyaa saa nyansa yi? Ɔkae sɛ: “Me kyerɛkyerɛ nyɛ me dea, na nea ɔsomaa me no dea.” (Yohane 7:​16) Ɔsomafo Paulo kyerɛkyerɛɛ mu sɛ Yesu ‘abɛyɛ nyansa a efi Nyankopɔn hɔ ama yɛn.’ (1 Korintofo 1:​30) Yehowa nam ne Ba, Yesu, so ada n’ankasa nyansa adi. Nokwarem no, na eyi te saa ankasa, na ɛmaa Yesu tumi kae sɛ: “Me ne agya no yɛ baako.” (Yohane 10:​30) Ma yɛnhwehwɛ mmeae abiɛsa a Yesu daa ‘nyansa a efi Nyankopɔn hɔ’ adi mu.
4. (a) Ná Yesu asɛm no ti ne dɛn, na dɛn nti na na ɛho hia paa? (b) Dɛn nti na na Yesu afotu yɛ nea wotumi de di dwuma na mfaso wɔ so ma n’atiefo bere nyinaa?
4 Nea edi kan no, susuw nea Yesu kyerɛkyerɛe ho hwɛ. Ná n’asɛm no ti ne “ahenni ho asɛmpa no.” (Luka 4:​43) Na ɛno ho hia kɛse esiane dwuma a na Ahenni no bedi de asan Yehowa tumidi ho, na ɛde nhyira abrɛ adesamma daa no nti. Yesu de da biara da asetra ho afotu a nyansa wom nso mae wɔ ne nkyerɛkyerɛ mu. Ɔdaa ne ho adi sɛ ɔne ‘Ɔfotufo Nwonwafo’ a wɔkaa ne ho asɛm siei no. (Yesaia 9:6) Nokwarem no, ɛbɛyɛ dɛn na n’afotu renyɛ nwonwa? Na ɔwɔ Onyankopɔn Asɛm ne n’apɛde ho nimdeɛ a emu dɔ, ɔte nnipa ase yiye, na na ɔwɔ adesamma ho dɔ kɛse. Enti, na n’afotu yɛ nea wotumi de di dwuma na mfaso wɔ so ma n’atiefo bere nyinaa. Yesu kaa “daa nkwa nsɛm.” Yiw, sɛ yedi n’afotu akyi a ɛde yɛn kɔ nkwagye mu.​—Yohane 6:68.
5. Nneɛma a Yesu kaa ho asɛm wɔ Bepɔw so Asɛnka no mu no bi ne dɛn?
5 Bepɔw so Asɛnka no yɛ nyansa a ɛso bi nni a ɛwɔ Yesu nkyerɛkyerɛ mu ho nhwɛso titiriw. Ɛda adi sɛ ebegye simma 20 pɛ na wɔde ama ɔkasa yi a wɔayɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Mateo 5:​3–7:​27 no. Nanso, emu afotu yɛ nea entwam da​—ɛho hia nnɛ te sɛ bere a edi kan a wɔde mae no ara pɛ. Yesu kaa nneɛma pii ho asɛm, a nea na ɛka ho bi ne sɛnea yɛbɛma yɛne afoforo ntam abusuabɔ ayɛ papa (5:23-26, 38-42; 7:1-5, 12), sɛnea yɛn ho bɛtew wɔ abrabɔ fam (5:27-32), ne sɛnea yɛbɛbɔ bra a mfaso wɔ so (6:19-24; 7:24-27). Nanso, Yesu yɛɛ pii sen ka a na ɔka asetra kwan a nyansa wom ho asɛm kɛkɛ akyerɛ n’atiefo; ɔnam nkyerɛkyerɛmu, nsɛm ho susuw, ne adanse a ɔde mae so na ɛkyerɛɛ wɔn.
6-8. (a) Ntease ahorow a emu yɛ den a ɛbɛma yɛagyae adwennwen bɛn na Yesu de ma? (b) Dɛn na ɛkyerɛ sɛ Yesu afotu da ɔsoro nyansa adi?
6 Sɛ nhwɛso no, susuw Yesu afotu a nyansa wom a ɛkyerɛ sɛnea wodi honam fam nneɛma ho adwennwen ho dwuma, sɛnea wɔaka ho asɛm wɔ Mateo ti 6 no ho hwɛ. Yesu tuu fo sɛ: “Munnnwinnwen mo kra ho sɛ dɛn na mubedi anaasɛ dɛn na mobɛnom, anaasɛ mo nipadua ho sɛ dɛn na mubefura.” (Nkyekyɛm 25) Aduan ne ntama yɛ asetram ahiade atitiriw, na ɛyɛ ne kwan so sɛ yebedwen sɛnea yebenya saa nneɛma yi ho. Nanso Yesu ka kyerɛ yɛn sɛ ‘yennnwennwen’ saa nneɛma no ho. * Dɛn ntia?
7 Tie bere a Yesu kyerɛkyerɛ nsɛm mu yiye no. Bere a Yehowa ama yɛn nkwa ne nipadua no, so ontumi mma yɛn aduan a ɛbɛwowaw saa nkwa no ne ntama a yɛde befura nipadua no? (Nkyekyɛm 25) Sɛ Onyankopɔn ma nnomaa aduan, na ofura nhwiren ntama ma ɛyɛ fɛ a, mpɛn ahe na ɔrenhwɛ n’asomfo a wɔyɛ nnipa no! (Nkyekyɛm 26, 28-30) Nokwarem, ntease biara nni adwennwen hunu so. Entumi nto yɛn nkwa so ketewaa bi mpo. * (Nkyekyɛm 27) Ɔkwan bɛn so na yebetumi akwati adwennwen? Yesu tuu yɛn fo sɛ: Monkɔ so mfa Onyankopɔn som nni kan mo asetra mu. Wɔn a wɔyɛ saa no betumi anya ahotoso sɛ wɔn soro Agya de wɔn da biara da ahiade nyinaa ‘bɛka wɔn ho.’ (Nkyekyɛm 33) Awiei koraa no, Yesu de nyansahyɛ a mfaso wɔ so sen biara mae sɛ​—yennnwennwen ɔkyena ho. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛde ɔkyena adwennwen ka ɛnnɛ de ho? (Nkyekyɛm 34) Afei nso, dɛn nti na ɛsɛ sɛ yedwennwen nneɛma a ebia ɛrensi da ho sɛnea ɛnsɛ? Afotu a nyansa wom saa a yɛde bedi dwuma no betumi ama yɛade yɛn ho afi akomatusɛm pii ho wɔ wiase a adwennwen ahyɛ mu ma yi mu.
8 Ɛda adi pefee sɛ, mfaso wɔ Yesu afotu a ɔde mae no so nnɛ te sɛ nea na mfaso wɔ so wɔ bere a ɔde mae bɛyɛ mfirihyia 2,000 a atwam ni no ara pɛ. So ɛnyɛ ɔsoro nyansa ho adanse? Nnipa afotu a nyansa a eye sen biara wom mpo no taa twam, na ɛnkyɛ na wɔayɛ mu nsakrae anaasɛ wɔasesa no. Nanso, Yesu nkyerɛkyerɛ ayɛ nea mfaso wɔ so bere nyinaa. Na ɛnsɛ sɛ ɛyɛ yɛn nwonwa, efisɛ Ɔfotufo Nwonwafo yi ‘kaa Onyankopɔn asɛm.’​—Yohane 3:34.
9. Dɛn na asraafo bi ka faa Yesu nkyerɛkyerɛ ho, na dɛn nti na na eyi nyɛ asɛm a wɔagugu mu?
9 Beae a ɛto so abien a Yesu daa Onyankopɔn nyansa adi ne sɛnea ɔkyerɛkyerɛe no. Bere bi, asraafo bi a wɔsomaa wɔn sɛ wɔnkɔkyere no de nsapan san kɔe kɔkaa sɛ: “Onipa biara nkasae sɛ onipa yi da.” (Yohane 7:​45, 46) Ná eyi nyɛ asɛm a wɔagugu mu. Wɔ nnipa a na wɔatra ase pɛn nyinaa mu no, Yesu a ‘ofi soro’ no na na ɔwɔ nimdeɛ ne osuahu sen biara a na nnipa betumi asua nneɛma pii afi mu. (Yohane 8:​23) Ɔkyerɛkyerɛe wɔ ɔkwan bi a onipa biara ntumi nkyerɛkyerɛ saa da so. Susuw akwan abien a Ɔkyerɛkyerɛfo nyansafo yi faa so no ho nhwɛ.
“Ne kyerɛkyerɛ no maa nkurɔfo akuwakuw no ho dwiriw wɔn”
10, 11. (a) Dɛn nti na Yesu mfatoho ahorow a ɔmae no betumi ayɛ yɛn nwonwa ɔkwan biara so? (b) Dɛn ne bɛ, na nhwɛso bɛn na ɛkyerɛ sɛ Yesu mmɛ no yɛ nea etu mpɔn yiye sɛ yɛde kyerɛkyerɛ?
10 Mfatoho a ɔde dii dwuma ɔkwan a etu mpɔn so. Wɔka kyerɛ yɛn sɛ: ‘Yesu kasa kyerɛɛ nkurɔfo akuwakuw no mmebu mu, na wankwati bɛ anka asɛm biara ankyerɛ wɔn.’ (Mateo 13:​34) Da biara da asetram nneɛma a ɔnam so tumi kyerɛkyerɛɛ nokware ahorow a emu dɔ wɔ ɔkwan a ɛso bi nni so no yɛ nwonwa ankasa. Akuafo a wɔregu aba, mmea a wɔreto abodoo, mmofra a wɔredi agoru wɔ gua so, apofofo a wɔretwe asawu, nguanhwɛfo a wɔrehwehwɛ nguan a wɔayera​—na eyinom yɛ nneɛma a n’atiefo ahu no mpɛn pii. Sɛ wɔde nneɛma a yenim yɛ nokware ahorow a ɛho hia ho mfatoho a, nokware a ɛte saa no ka yɛn adwene ne yɛn komam ntɛm.​—Mateo 11:​16-19; 13:​3-8, 33, 47-50; 18:​12-14.
11 Na Yesu taa bu bɛ, ɔka nsɛm ntiantiaa a yenya abrabɔ anaa honhom fam nokware ahorow ho asuade wom. Esiane sɛ asɛm a wɔka fa biribi pɔtee ho asete ne ne kae nyɛ den sɛnea nsusuwii a enni nnyinaso te nti, mmɛ no boae ma wɔkaee Yesu nkyerɛkyerɛ no. Yesu kaa N’agya ho asɛm wɔ mfonini kwan so fann wɔ mmɛ pii mu a na ɛbɛyɛ den sɛ obi werɛ betumi afi. Sɛ nhwɛso no, hena na ɔrentumi nhu asɛntitiriw a ɛwɔ ɔba hohwini ho bɛ yi mu​—sɛ, sɛ obi a wafom kwan da nokware ahonu adi a, Yehowa behu no mmɔbɔ na wasan agye no atom wɔ ɔdɔ mu?​—Luka 15:​11-32.
12. (a) Ɔkwan bɛn so na Yesu de nsɛmmisa dii dwuma wɔ ne nkyerɛkyerɛ mu? (b) Ɔkwan bɛn so na Yesu maa wɔn a wobisaa ne tumi ho asɛm no yɛɛ komm?
12 Nsɛmmisa a ɔde dii dwuma ahokokwaw so. Yesu de nsɛmmisa dii dwuma maa n’atiefo ankasa maa mmuae, hwehwɛɛ adwene ahorow a wokura mu, anaasɛ wosisii wɔn ankasa gyinae. (Mateo 12:​24-30; 17:​24-27; 22:​41-46) Bere a nyamesom akannifo no bisaa Yesu sɛ ɔwɔ Onyankopɔn tumi anaa no, obuae sɛ: “Yohane asubɔ no, efi soro anaasɛ efi nnipa?” Bere a asɛmmisa no maa wɔn ho dwiriw wɔn no, wosusuw ho wɔn mu kae sɛ: “Sɛ yɛka sɛ efi soro a, ɔbɛka sɛ: Ɛnde ɛdɛn nti na moannye no anni? Anaa yɛnka sɛ: Efi nnipa? nanso wosuro nkurɔfokuw no; efisɛ nnipa nyinaa bu Yohane sɛ ɔyɛ odiyifo ampa.” Awiei koraa no, wobuae sɛ: “Yennim.” (Marko 11:​27-33; Mateo 21:​23-27) Yesu nam asɛm bi a ɛnyɛ den a obisae so ma wɔyɛɛ komm, na wɔn komam nnaadaasɛm daa adi.
13-15. Ɔkwan bɛn so na Samariani mmɔborohunufo no ho bɛ no da Yesu nyansa adi?
13 Ɛtɔ mmere bi a na Yesu de akwan horow di dwuma bisabisa nsɛm bi a ɛkanyan adwene wɔ ne mfatoho ahorow mu. Bere a Yudani mmarakyerɛfo bi bisaa Yesu nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ na ama wanya daa nkwa no, Yesu twee n’adwene sii Mose Mmara a ɛka sɛ yɛnnɔ Onyankopɔn ne yɛn yɔnko nnipa no so. Esiane sɛ na ɔbarima no pɛ sɛ ɔda ne ho adi sɛ ɔyɛ ɔtreneeni nti, obisae sɛ: “Hena ne me yɔnko?” Yesu kaa asɛm bi de maa mmuae. Adwowtwafo hwee Yudani barima bi a na ɔno nkutoo retu kwan, gyaw no hɔ a na ɔreyɛ awu. Yudafo baanu, nea edi kan, ɔsɔfo, ne afei Lewini, betwaam. Wɔn baanu nyinaa ammoa no. Afei Samariani bi betwaam hɔ. Ne yam hyehyee no, ma ɔtɔɔ ne bo ase kyekyeree ɔbarima no akuru no fii ɔdɔ mu de no kɔɔ ahɔhodan mu dwoodwoo, baabi a na obetumi ate apɔw. Bere a Yesu de asɛm no reba awiei no, obisaa ɔsɛmmisafo no sɛ: “Afei wɔn baasa yi mu hena na wususuw sɛ wayɛ nea ɔkɔtɔɔ akwanmukafo mu yi yɔnko?” Ɔbarima no buae sɛ: “Nea ohuu no mmɔbɔ no.”​—Luka 10:​25-37.
14 Ɔkwan bɛn so na ɛbɛ no da Yesu nyansa adi? Wɔ Yesu bere so no, na Yudafo no de asɛm “yɔnko” frɛ wɔn a na wodi wɔn atetesɛm so nkutoo​—akyinnye biara nni ho sɛ na Samariafo nka ho. (Yohane 4:9) Sɛ anka Yesu kaa Samariani bi a wopiraa no ne Yudani bi a ɔkɔboaa no ho asɛm a, so anka ɛno beyi nsusuwii bɔne no afi hɔ? Yesu fi nyansam kaa asɛm no ma ɛbɛyɛɛ sɛ Samariani na ofii ayamye mu boaa Yudani bi. Hyɛ asɛm a Yesu bisae wɔ asɛm no awiei no nso nsow. Ɔdanee adwene fii nea wosusuw sɛ asɛm “yɔnko” fa ne ho no so. Sɛ yɛbɛka a, mmarakyerɛfo no bisaa no sɛ: ‘Hena na ɛsɛ sɛ ɔyɛ me yɔnko a enti ɛsɛ sɛ medɔ no?’ Nanso, Yesu bisae sɛ: ‘Afei wɔn baasa yi mu hena na wususuw sɛ ɔyɛɛ ne yɔnko?’ Yesu antwe adwene ansi nea wɔdaa ayamye adi kyerɛɛ no, nea wopiraa no no so, na mmom nea ɔdaa ayamye adi, Samariani no. Ɔyɔnko pa fi ne pɛ mu da ɔdɔ adi kyerɛ afoforo ɛmfa ho abusua a wofi mu. Ná Yesu ntumi mfa ɔkwan foforo biara so mma asɛm no mu nna hɔ nsen eyi.
15 So ɛyɛ nwonwa sɛ Yesu ‘nkyerɛkyerɛ’ no maa nkurɔfo no ho dwiriw wɔn na wɔbɛn no no? (Mateo 7:​28, 29) Bere bi ‘nkurɔfokuw a wɔdɔɔso’ traa ne nkyɛn nnansa a wɔannidi mpo!​—Marko 8:​1, 2.
16. Ɔkwan bɛn so na Yesu ‘kyerɛe ankasa’ sɛ Onyankopɔn nyansa na ɛkyerɛɛ no kwan?
16 Beae a ɛto so abiɛsa a Yesu daa Yehowa nyansa adi ne n’asetra kwan. Nyansa yɛ ade a mfaso wɔ so; ɛyɛ adwuma. Osuani Yakobo bisae sɛ: “Mo mu hena na ɔyɛ onyansafo.” Afei obuaa n’ankasa asɛm no sɛ: “Ɔmfa ne bra pa nkyerɛ sɛnea ɛte.” (Yakobo 3:​13, The New English Bible) Sɛnea Yesu yɛɛ n’ade no ‘kyerɛe ankasa’ sɛ Onyankopɔn nyansa na na ɛkyerɛ no kwan. Ma yensusuw sɛnea ɔdaa atɛmpa adi wɔ n’asetra kwan mu ne sɛnea ɔne afoforo dii nsɛm no ho.
17. Adanse ahorow bɛn na ɛwɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ na Yesu kari pɛ wɔ n’asetra mu?
17 So woahyɛ no nsow sɛ nnipa a wonni atɛmpa taa yɛ ade tra so? Yiw, egye nyansa na ama obi akari pɛ. Yesu karii pɛ wɔ Onyankopɔn nyansa a ɔdaa no adi mu. Nea ɛsen ne nyinaa no, ɔde honhom fam nneɛma dii kan wɔ n’asetra mu. Na ɔyɛ asɛmpaka adwuma no a onni adagyew koraa. Ɔkae sɛ: “Eyi nti na mebae.” (Marko 1:​38) Sɛnea ɛte no, na honam fam nneɛma nyɛ no ade titiriw; ɛte sɛ nea na onni honam fam nneɛma pii. (Mateo 8:​20) Nanso, na ɔnyɛ ɔhotuafo. Yesu, te sɛ N’agya, ‘anigye Nyankopɔn’ no, yɛ obi a na ɔwɔ anigye, na ɔmaa afoforo nso ani gyei. (1 Timoteo 1:​11; 6:​15) Bere a ɔkɔɔ ayeforohyia apontow bi ase​—adeyɛ a wɔtaa bɔ nnwom, to nnwom, na wodi ahurusi wɔ ase​—no, wankɔ hɔ sɛ ɔrekɔma agoru no agu. Bere a nsa no sae no, ɔdanee nsu nsa pa, anonne a ‘ɛma ɔdesani koma tɔ ne yam.’ (Dwom 104:​15; Yohane 2:​1-11) Yesu penee nsa a wɔto frɛɛ no kɔɔ adidi ahorow ase no so, na na ɔtaa kyerɛkyerɛ wɔ adeyɛ a ɛtete saa ase.​—Luka 10:​38-42; 14:​1-6.
18. Ɔkwan bɛn so na Yesu de atɛmpa dii dwuma wɔ ɔne n’asuafo no nsɛnnii mu?
18 Yesu de atɛmpa dii dwuma wɔ ɔne afoforo nsɛnnii mu. Sɛnea na onim nnipa su no maa ohuu n’asuafo no yiye. Na onim no yiye sɛ wɔnyɛ pɛ. Nanso, ohuu su pa ahorow wɔ wɔn ho. Ohuu nneɛma pa a na nnipa a Yehowa atwe wɔn yi betumi ayɛ no. (Yohane 6:​44) Wɔn sintɔ ahorow no nyinaa akyi no, Yesu daa no adi sɛ ɔwɔ wɔn mu ahotoso. Bere a ɔreda ahotoso a ɛte saa adi no, ɔde asɛyɛde a emu yɛ duru hyɛɛ n’asuafo no nsa. Ɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔnka asɛmpa no, na na ɔwɔ wɔn mu ahotoso sɛ wobetumi ayɛ saa adwuma no. (Mateo 28:​19, 20) Asomafo no Nnwuma no di adanse sɛ wɔde nokwaredi yɛɛ adwuma a ɔde hyɛɛ wɔn nsa no. (Asomafo no Nnwuma 2:​41, 42; 4:​33; 5:​27-32) Ɛnde, ɛda adi pefee sɛ na nyansa wom sɛ Yesu nyaa wɔn mu ahotoso.
19. Ɔkwan bɛn so na Yesu daa no adi sɛ ‘odwo na ɔbrɛ ne ho ase koma mu’?
19 Sɛnea yehui wɔ Ti 20 no, Bible de odwo bata nyansa ho. Nokwarem no, Yehowa yɛ eyi ho nhwɛso pa. Na Yesu nso ɛ? Ɛyɛ anigye sɛ wubehu ahobrɛase a Yesu daa no adi wɔ ɔne n’asuafo nsɛnnii mu. Sɛ́ onipa a ɔyɛ pɛ no, na ɔkorɔn sen wɔn. Nanso, wammu n’asuafo no animtiaa. Saa ara na wamma wɔante nka sɛ wɔba fam anaasɛ wɔmfata da. Mmom no, osusuw wɔn sintɔ ahorow ho na onyaa wɔn mfomso ahorow ho boasetɔ. (Marko 14:​34-38; Yohane 16:​12) So ɛnyɛ nwonwa sɛ mmofra mpo de abotɔyam kɔɔ Yesu nkyɛn? Akyinnye biara nni ho sɛ wɔbɛn no efisɛ na ‘odwo na na ɔbrɛ ne ho ase koma mu.’​—Mateo 11:​29; Marko 10:​13-16.
20. Ɔkwan bɛn so na Yesu daa ntease adi wɔ ɔne Amanaman muni bea bi a na adaemone rehaw ne babea no nsɛnnii mu?
20 Yesu daa Onyankopɔn dwo adi wɔ ɔkwan a ɛho hia foforo so nso. Na ɔda ntease adi, anaasɛ ogyae nsɛm mu, bere a mmɔborohunu ma eyi fata no. Sɛ nhwɛso no, kae bere a ɔbea bi a ɔyɛ Amanaman muni srɛɛ no sɛ ɔnsa ne babea a na adaemone haw no dodo yare no. Mfiase no, Yesu faa akwan abiɛsa so kyerɛe sɛ ɔremmoa ɔbea no​—nea edi kan, wammua no; nea ɛto so abien, denam ka a ɔka kyerɛɛ no tẽẽ sɛ wansoma no Amanaman mufo nkyɛn na mmom Yudafo nkyɛn no so; na nea ɛto so abiɛsa no, denam mfatoho bi a ɔyɛe a esii asɛnkoro no ara so dua ayamye mu no so. Nanso, ɔbea no kɔɔ so srɛɛ no, a edii adanse sɛ na ɔwɔ gyidi soronko. Wɔ tebea soronko yi mu no, Yesu yɛɛ n’ade dɛn? Ɔyɛɛ ade a ɔkae sɛ ɔrenyɛ no. Ɔsaa ɔbea no babea no yare. (Mateo 15:​21-28) Odwo a ɛyɛ nwonwa, ɛnte saa? Na kae sɛ, odwo ne ade a wogyina so da nokware nyansa adi.
21. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mmɔden suasua Yesu nipasu, ne kasa, ne n’akwan?
21 Hwɛ sɛnea yebetumi anya anigye sɛ Nsɛmpa no da onipa a onim nyansa sen biara a watra ase pɛn nsɛm ne ne nneyɛe adi! Ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ Yesu daa N’agya su adi pɛpɛɛpɛ. Sɛ yesuasua Yesu nipasu, ne kasa, ne n’akwan a, yebenya nyansa a efi soro. Wɔ ti a edi hɔ mu no, yebehu sɛnea yebetumi de Onyankopɔn nyansa adi dwuma wɔ yɛn asetra mu.
^ nky. 1 Wɔ Bible mmere mu no, na wɔbɔ dua adwumfo paa ma wosisi adan, yɛ nkongua ne apon, ne nnwinnade a wɔde yɛ kuadwuma. Justin Martyr a ɔtraa ase wɔ afeha a ɛto so abien Y.B. mu no kyerɛw Yesu ho asɛm sɛ: “Bere a na ɔwɔ nnipa mu no, na ɔyɛ adwuma sɛ duadwumfo, na ɔyeyɛɛ fɛtɛw ade ne kɔndua.”
^ nky. 6 Nea Hela adeyɛ asɛm a wɔkyerɛɛ ase ‘dwennwen’ no kyerɛ ne sɛ “biribi begye w’adwene.” Sɛnea wɔde dii dwuma wɔ Mateo 6:​25 no, ɛkyerɛ adwennwen a ɛma ehu ka obi anaasɛ ɛma n’adwene hinhim, na ɛma anigye a ɔwɔ wɔ asetram sɛe no.
^ nky. 7 Nokwarem no, nyansahu nhwehwɛmu ada no adi sɛ adwennwen ntraso betumi ama yɛanya komayare ne nyarewa foforo pii a ebetumi atwa yɛn nkwa nna so.
Mmebusɛm 8:​22-31 Ɔkwan bɛn so na nyansa a wɔka ho asɛm sɛ onipa no ne nea Bible ka fa Yehowa Abakan no ho hyia?
Mateo 13:​10-15 Ɔkwan bɛn so na Yesu mfatoho ahorow no tumi maa nea na ɛwɔ n’atiefo komam daa adi?
Yohane 1:​9-​18 Dɛn nti na Yesu tumi daa Onyankopɔn nyansa adi?
Yohane 13:​2-5, 12-17 Ɔkwan bɛn so na Yesu yɛɛ nhwɛsode, na asuade bɛn na ɔnam so kyerɛkyerɛɛ n’asomafo no?